Rafi-masoandro: Fahasamihafan'ny versiona - Wikipedia
Rafi-masoandro: Fahasamihafan'ny versiona
Endrik'io pejy io tamin'ny 25 Febroary 2019 à 17:12
28 octets supprimés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 26 Jiona 2015 à 12:23 (hanova)
Endrika tamin'ity 25 Febroary 2019 à 17:12 ity (hanova) (esory)
[[Sary:Solar sys.jpg|Rafitry ny masoandro|200px311x311px|right|thumb]]
Ny '''rafi-masoandro''' na koa '''rafitry ny masoandro''' dia vondrom-pajiry ahitana [[kintana]] iray na maro, ny [[Masoandro]]. Ny rafitry ny masoandrontsika dia ahitana fajiry valo ary [[volana]] 175, fajiry madinika dimy ary zavatra madinika an-davitrisany.
== Fiantsoana ==
Araky ny fanapahan-kevitra nataon'ny Vondron'ny hainkintana iraisam-pirenena tamin'ny [[24 Aogositra]] 2006, dia voasokajy anaty sokajy telo ny zavatra ara-kainkintana misoridala-manodidin'ny Masoandro : ny fajiry (na planeta), fajiry madinika, ary ny zavatra madinika.
== Firafitra ary mpanorina ==
Ny singa lehibe indrindra ao amin'ny rafitry ny masoandro dia ny Masoandro, izay 99,85%-n'ny lanja fantatry ny rafitry ny masoandro, ary izay manjaka ny rafitra amin'ny lafin'ny [[vesa-jaka]]. 99%-n'ny lanja manontolon'ny lanja sisany ny fajiry etona lehibe.
=== Halavirana ary mari-drefy ===
Refy ara-kainkintana (AU, avy amin'ny teny anglisy «''astronomical unit''») 1 ny halaviran'ny Tany amin'ny Masoandro. Arak'izany dia 0,0047 AU ny savaivon'ny Masoandro. 5,2 AU amin'i Masoandro ny halaviran'i Jiopitera, Neptiona izay fajiry lavitra indrindra amin'ny Masoandro dia manana halavirana 30 AU (4,5 miliara500 000 000 km).
<div class="infobox" style="float: none;">
=== Faritra lavitra ===
Amin'ny faritra lavitry ny rafitry ny Masoandro kosa dia ahitana ny [[fonomasoandro]] (heliosheath/héliogaine), ny [[sisimasoandro]] (heliopause), ny [[rahon'i Oort]] ary ny [[rahon'i Hills]].
==== Fonomasoandro ====
[[Sary:Voyager 1 entering heliosheath region.jpg|400px|Sary maneho ny onja dona (bow shock), ny fonomasoandro, ary ny dona famaranana (terminal shock)|thumb|right]]
Voazara ho faritra roa ny heliôsfera (faritra anjakan'ny rivo-masoandro). Mandeha farany izay haingana ny rivo-masoandro hatreo amin'ny 95AU eo ho eo, izay in-telon'ny fahalaviran'i Plotô ary ny Masoandro. Rehefa mihoatra izay izy dia mifandona amin'ny rivotry ny kintana hafa. Mihamoramora ny fandehanany, voahelingelina ny fahdehany. Fonomasoando no iantsoana io faritra ihamoramoran'ny fandehany io. Ny [[sisimasoandro]] no antsoina ny faritra anjavonan'ny rivo-masoandro avy amin'ny Masoandro.
Miankina amin'ny fifandraisany amin'ny fari-kabakabaka iraisan-kintana ny endriky ny sisimasoandro. Rehefa miala amin'ny sisimasoandro (230 AU miala amin'ny masoandro), dia ahitana [[onja onjan-dona]] izay faritra plasma avelan'ny Masoandro amin'ny diany ao amin'ny [[Lalana Mandronono]].
==== Rahon'i Oort ary rahon'i Hills ====
* [[Fajiry|Fajiri]]n'ny Rafitry ny masoandro
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/966645"